ကျောင်းမှာသင့်ကလေးကိုကူညီပါ | USAHello | USAHello
ကျောင်းကစတင်ကာစိတ်လှုပ်ရှားစရာနဲ့ Hard နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျကြောငျးတှငျသင့်ကလေးကိုကူညီပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သူတို့ကျောင်းဘဝ၌သင်တို့၏သားသမီးတို့ကိုထောကျပံ့သူတို့ကိုအောင်မြင်ဖို့ကူညီဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ. သင့်ကလေးအတွက်ကျူရှင်ထောက်ခံမှုအကြောင်းကိုထွက်ရှာမည်.
ကလေးငယ်များအများဆုံးအချိန်ဖြုန်းဘယ်မှာကျောင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကကျောင်းဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုလေ့လာသင်ယူ. မိဘများကိုကူညီရန်အဘို့အဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ကောင်းစွာမသိစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်နည်းလမ်းများစွာသင်သည်သင်၏ကလေးသည်ကိုကူညီနိုငျရှိပါတယ်. တဖန်သင်တို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုကူညီဖို့ဘယ်လိုသူတို့ကိုဖျောပွနိုငျ! ဒီနေရာတွင်ကျောင်းမှာသင့်ကလေးကိုကူညီအချို့အတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြောင်း.
ကျောင်းကလေးတစ်အမြဲသူသို့မဟုတ်သူမခံစားဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုမည်မဟုတ်. သူတို့ကတစ်ဦးခက်အချိန်ရှိခြင်းစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသငျသညျစိုးရိမျခငျြမပြုစေခြင်းငှါ. သူတို့ခံစားနေကြမကြာခဏဘယ်လိုသူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ. သငျသညျကိုမေးလျှင်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပြဿနာအကြောင်းကိုသင်ပြောပြဖို့ပိုများပါတယ်.
သစ်တစ်ခုကျောင်းတွင်စတင်နိုင်ရန်ခဲယဉ်းသည်. ကျောင်းကပဌမနေ့ရက်မတိုင်မီသင့်ကလေးနှင့်အတူကျောင်းသို့သွားရောက်. ထိုအခါသူတို့ကသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့၌ဒါရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
USA တွင်ကလေးအတော်များများအသင်းများအတွက်အားကစား play. အခြားသူများကကျောင်းမှာအပြီးကလပ်အသင်းသို့မဟုတ်ကစားဂီတ join. သင့်ကလေးကိုမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်ထွက်ရှာမည်. အားကစားဆိုင်ရာကျန်းမာသူတို့ကိုစောင့်ကူညီရန်နှင့်မိတ်ဆွေများစေမည်.
ကျောင်းတွင်စတင်မတိုင်မီသင့်ကလေးကိုလိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ကြိုးစားပါ. သငျသညျထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမတတ်နိုင်လျှင်, သင့်ကလေး၏ဆရာစကားပြော. သူတို့ကဘယ်မှာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူကူညီရငျသညျပွောကွလိမျ့မညျ.
ဆရာ, ဆရာမနှင့်အတူရိုးသား Be
အမေရိကန်ကျောင်းများသားသမီးရဲ့သက်သာချောင်ချိရေးနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်အဖြစ်၎င်းတို့၏ပညာရေးနှင့်အတူရှိသော. လည်း, အမေရိကန်ဆရာများကအလွန်တိုက်ရိုက်များမှာ. သူတို့ကမည်သည့်အပြုအမူပြဿနာများအကြောင်းကိုပြောပြရန်လိုပေမည်. ကျောင်းဟာအလွန်ငယ်ရွယ်လေးအတွက်, သူတို့အလောင်းနှင့်အတူကိစ္စများအကြောင်းပြောဆိုစေခြင်းငှါ. ဥပမာ, တစ်မူကြိုဆရာမသင့်ကလေးအစာအိမ်ဒုက္ခရှိခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ဖုဖြစ်ပါတယ်သင်ပြောပြစေခြင်းငှါ,. ဤသူသည်သင်တို့မသက်မသာစေသည်ဆိုပါက, ဆရာမကသင့်ကလေးကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းသတိရ. သငျသညျပွဿနာမြားနှငျ့တွေ့ရှိချက်ဖြေရှင်းချက်အကြောင်းကိုရိုးရိုးသားသားပြောနေတာဖြင့်သင့်ကလေးနှင့်ဆရာကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျ.
ကျူရှင်ကျောင်းသားများကိုကူညီပေးသည်. အရွယ်ရောက်သူ, ဆရာမ, သို့မဟုတ်အခြားကျောင်းသားကျောင်းသားတစ်ဦးကျူရှင်နိုင်မည်အကြောင်း. သင့်ရဲ့ကျောင်းသားအခြားကျောင်းသားများကျူရှင်နိုင်မည်အကြောင်း, လွန်း. ကျောင်းသားများကိုကျူရှင်လက်ခံရရှိရန်အဘို့အခြို့သောကျောင်းများတွင်ကျောင်းကအပြီးသို့မဟုတ်အချို့သောအတန်းစဉ်အတွင်းအစီအစဉ်များရှိ.
တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများမှလည်းနည်းပြဆရာ. ကျူရှင်ဆရာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်ဘာသာရပ်ကိစ္စများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ. ပုဂ္ဂလိကကျူရှင်များသောအားဖြင့်ကျောင်းကအပြီးဖြစ်ပျက်နှင့်ငွေကုန်ကျမည်. သင်တို့သည်လည်းအနီးအနားရှိအဖှဲ့အစညျးမှာဒေသခံတစ်ဦးအစီအစဉ်မှသင့်ရဲ့ကျောင်းသားများအတွက်အခမဲ့ကျူရှင်အကူအညီနဲ့ရှာတွေ့နိုင်မည်အကြောင်း, ဘာသာရေးအသိုင်းအဝုိင်း, သို့မဟုတ်အပြီးကျောင်းအစီအစဉ်ကို. ရုံဒုက္ခသည်များနှင့်အခြားမျက်နှာသစ်ကျောင်းသားများကိုကူညီမှုအတွက်အဖွဲ့အစည်းများရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်. သင့်ကျောင်းရုံးအနီးအနားရှိပုဂ္ဂလိကကျူရှင်ဆရာများသည်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကျူရှင်များစာရင်းကိုရှိစေခြင်းငှါ. သင်တို့သည်လည်းထဲမှာကြည့်နိုင်ပါတယ် FindHello သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာအစီအစဉ်များအတွက်.
သူတို့ကလေးဖြစ်သည့်အခါကလေးများ daycare စတင်နိုင်ပါသည်. တချို့က daycares သာနေသောကလေးများယူပါလိမ့်မယ်2လအရွယ်. ကလေးများများသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်4သို့မဟုတ်5အသက်အနှစ်ရသောအခါသူတို့သူငယ်တန်းစတင်ရန်. သူတို့သည်အလွန်အကူအညီလိုတဲ့အခါဒီဖြစ်ပါသည်.
မူကြိုနှင့် daycare အတွက်ဆရာများတဲ့အခါမှာသူတို့ကမပေးနိုင်သူတို့ကိုဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ကူညီပေးဖို့ကလေးအတော်များများသင်ပေး. အဝတ်ကိုချွတ်ယူရန်လွယ်ကူတဲ့အခါ, သင်ကလေးနှင့်ဆရာမနှစ်ဦးစလုံးကူညီပေးနေကြပါသည်.
သင့်ကလေးကျောင်းတွင်တိတ်ဆိတ်အချိန်တစ်မောအိပ်ကြာသို့မဟုတ်လျှင်, အိမ်မှာအတူတူပြုပါ. ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူသူတို့ကိုကျောင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းလိုက်နာရန်အဘို့အစေမည်.
စာဖတ်ခြင်းသင်၏သားသမီးငယ်ရွယ်အခါစတင်ရန်ကောင်းတစ်ဦးအလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည်. စာဖတ်ခြင်းသင့်ကလေးကျောင်းကောင်းသောအမှုကိုပြုကူညီပေးသည်. သင့်ကလေးကိုအနည်းငယ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ကိုဖတ်ရှုဖို့ကြိုးစားပါနှင့်အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ကောင်းစွာမသိလျှင်, ရုပ်ပုံစာအုပ်များရှာဖွေပုံထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်ပြောပြရန်သင့်ကလေးမေးပါ. သင်တို့သည်လည်းအတူတူအင်္ဂလိပ်အက္ခရာများသင်ယူဖို့စတငျနိုငျ.
သင့်ကလေးကိုတန်းစတင်မည် 1 အသက်အရွယ်မှာ 6. မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းအဆင့်ပါဝင်သည် 1 သို့ 8.
USA တွင်ကလေးများသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအိမ်စာအချို့ကိုမျိုးရ. သငျသညျညစဉ်ညတိုင်းအနည်းဆုံးနည်းနည်းလုပ်ဖို့သူတို့ကိုအားပေးသင့်တယ်. သင်သည်သူတို့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ကြဘူးဆိုပါက, အဲဒီအကြောင်းသင်တို့ကိုပြောပြရန်သူတို့ကိုမေးဖို့. အခါသင်တတ်နိုင်သမျှသူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ကြိုးစားပါ.
သင့်ကလေးလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုသင်ယူဖို့မိဘဆရာညီလာခံတက်ရောက်ရန်သေချာပါစေ. သင်တစ်ဦးဘာသာပြန်ဆိုသူလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ရှေ့ဆက်အချိန်ဆရာမကမေးရန်သင့်ကလေးကိုပြောပြ. သငျသညျစိတ်ပူဖြစ်အံ့သောငှါဘာမှ ပတ်သက်. ဆရာပြောပြရန်မစိုးရိမ်.
သူတို့ကျွမ်းကျင်စွာစာဖတ်သူများများမှာသည်အထိနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပါ. သငျသညျအင်္ဂလိပ်မသိလျှင်, သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုသင်ဖတ်ပါနှင့်ဘာသာပြန်ဆိုဖို့သူငယ်ကိုမေးနိုငျ. ကလေးအတော်များများသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုကစားရန်လိုပေမည်, တီဗီကြည့်သည်, သို့မဟုတ်ဤအသက်အရွယ်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရှိ. သူတို့ရဲ့အချိန်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်စာဖတ်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်သောသူတို့အားပြသရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ.
သူတို့အခါကလေးများအများအားဖြင့်အထက်တန်းစတင်ရန် 14 သို့မဟုတ် 15. အထက်တန်းကျောင်းကွဲပြားခြားနားသောစိန်ခေါ်မှုများဆောင်တတ်၏.
ဒီအသက်အရွယ်မှာ, သင့်ကလေးသင်သည်သူတို့ရန်အသုံးပြုသလောက်မပြောစေခြင်းငှါ. သူတို့သင်ယူနေကြသည်နှင့်မည်သို့သူတို့ခံစားနေကြတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြောဆိုရန်သူတို့ကိုအားပေးပါ.
သင့်ကလေးအားကစားသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများမပါလျှင်, သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်သူတို့ထံသို့သှား. US မှာမိဘများတက်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံအမြိုးသားအထောကျပံ့. ဤသည်ကိုလည်းသင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ပိုမိုလူတွေဖြည့်ဆည်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းသားများကိုကောလိပ်အဘို့အစီစဉ် Start ရသောအခါအထက်တန်းဖြစ်ပါသည်. ၎င်းတို့၏အစီအစဉ်များ၌သင်တို့၏သားသမီးတို့အားပေး. အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အတူကျောင်းထံမှအကူအညီကိုရယူပါ.
ဆယ်ကျော်သက်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းခဲယဉ်းသည်! သင်အမြဲငါတို့သားသမီးကြီးထွားလာသောအခါအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိနှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုမပြုစေခြင်းငှါ. ဤသည်၏သားတို့သည်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောမိခင်များအဘို့အခက်ခဲဆုံးနိုင်ပါတယ် 17 နှင့်အထက်. သင့်ရဲ့ကျောင်းသားအထက်တန်းကျောင်းပျက်ကွက်လျှင်, သူကအတန်းကိုကျော်သွားသို့မဟုတ်လုံးဝကျောင်းကိုစွန့်ခွာစေခြင်းငှါ.
သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များထွက်သည် Watch. သင့်ကလေးကိုစိတ်ဓာတ်ကျပုံရသည်သို့မဟုတ်ကျောင်းအကြောင်းအရာကိုသင်တို့ထံသို့ပြောနေတာရပ်နေလျှင်, သူကပျက်ကွက်စေခြင်းငှါ. သငျသညျစကားပွောဖို့သူ့ကိုအားပေးဖို့ဂရုတစိုက်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့မေးခွန်းများကိုမေးရန် Continue. သူသို့မဟုတ်သူမ၏ဆရာ, ဆရာမနှင့်အတူထိတွေ့နှင့်ကျောင်းနေ, ဒါကြောင့်သင်တို့အပေါ်မှာသွားအရာကိုသိ. ပြဿနာများနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက.
သင်အမှန်တကယ်စိုးရိမ်နေလျှင်, အကူအညီတောငျး. ယင်းနှင့်အတူ Start အမျိုးသားမိဘတိုင်ကြားမှု. ဒါဟာမှာဖုန်းကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်အကြံပေးနိုင်သူလူပေါင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည် (855) 427-2736, သောကြာနေ့မှတနင်္လာ, 10 နံနက် PST မှ7ညနေ PST. ဒါဟာအစအများအပြားအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်.